Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Hamburg dia “vahinin'ny voninahitra” amin'ny hetsika fiaramanidina manandanja indrindra any Canada
Ny andraikitry ny vahiny manan-kaja amin'ny hetsika manandanja indrindra ao amin'ny indostria dia dingana iray hafa mahomby amin'ny fiaraha-miasa ofisialy eo amin'ny toeran'ny seranam-piaramanidina ao Hamburg sy Montréal, izay mahazo vola mitentina efatra tapitrisa euro avy amin'ny paikady vaovao avo lenta an'ny ny Minisiteran'ny Fanabeazam-pirenena sy ny Fikarohana federaly alemà (BMBF).
Sambany i Hamburg no voafidy ho vahiny manan-kaja amin'ny hetsika manan-danja indrindra amin'ny kalandrie an'ny indostrian'ny sidina kanadiana. Amin'ny International Aerospace Week Montréal (16-20 aprily 2018), ny tanàna Alemanina avaratra dia tompon'andraikitra ofisialy "Head Delegation", miaraka amin'ireo solontena avy amin'ny sehatry ny fikarohana sy fanabeazana, indostrialy ary politika.
Ny hetsika dia manomboka amin'ny Aerospace Innovation Forum, izay antenaina indrindra ny mpandray anjara. I Hamburg dia hisolo tena ny tambajotran-tserasera Hamburg Aviation. Ny Ivontoerana ZAL an'ny Fikarohana Aeronautical Applied dia avy eo handrindra ny fampisehoana fandaharan'asa 17, izay misy mpandray anjara alemanina marobe ao amin'ny RDV Forum 2018, izay itadiavana hevitra momba ny fikarohana sy ny fampandrosoana mba hahazoan'ny mpampiasa vola.
Ny tena mahasarika manokana ity dia ny fandraisana anjara dia manolotra ireo mpiara-miombon'antoka mpikaroka alemana miaraka amin'ny fahafaha-miasa, amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'izy ireo amin'ireo mpiara-miasa kanadiana, mba hahazoany tombony mivantana amin'ny famatsiam-bola azo any Canada. Miaraka amin'ny tetik'asa fikarohana iraisana momba ny vilanin'ny fiaramanidina milamina kokoa sy ireo singa fibre mitambatra tsy misy afo, dia akaiky tokoa ny fiaraha-miasa transatlantika hatramin'ny niorenany tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny taona lasa ary mihazakazaka amin'ny famaranana feno.
“Ireo orinasa madinidinika sy salantsalany manokana indrindra dia afaka mahazo tombony be amin'ny fiaraha-miasa sy ny fifanakalozana eo amin'i Alemana sy Kanada. Tsy vitan'ny hoe afaka manokatra tsena mpanjifa vaovao izy ireo, fa afaka manitatra ny fahaizany manokana sy portfolio-vokatra miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny toerana misy azy avy. Izy io dia miantoka asa mandritra ny fotoana maharitra amin'ny andaniny roa amin'ny Atlantika, "hoy ny Dr. Franz Josef Kirschfink, Tale mpitantana ny Hamburg Aviation.
"Amin'ny alàlan'ny famelana ireo orinasa alemanina hiresaka lalindalina amin'ny fikarohana kanadiana sy mpiara-miombon'antoka indostrialy amin'ny Herinandron'ny Aerospace Iraisam-pirenena, hizaha ireo saha ho an'ny ho avy toy ny acoustics, robotics, ny digitalisation ny famokarana, ary ny cabins avaratra vaovao, afaka mandray ny fiaraha-miasa mahomby isika eo amin'ny aviation mpilalao any amin'ny firenena roa tonta amin'ny sehatra vaovao, "hoy i Roland Gerhards, tale jeneralin'ny ZAL Center for Applied Aeronautical Research.
Ny fanatrehan'i Hamburg amin'ny Herinandro Iraisampirenena Aerospace dia efa manomboka ny alahady 15 aprily, miaraka amin'ny fandraisana amin'ny fomba ofisialy ataon'ny Consul-General of the Federal Republic of Germany and the Hamburg Senate. Mpampiresaka maherin'ny 100 no antenaina hanatrika ny Aerospace Innovation Forum, ary mihoatra ny 1,400 ny fivorian'ny orinasa kasaina hatao. Ny hetsika, karakarain'ny tambajotram-boaloboka Aéro Montréal kanadianina, dia atao amin'ny 16 sy 17 aprily. Ny 18 sy 19 aprily, ny orinasa, oniversite ary andrim-pikarohana dia hametraka ny hevitr'izy ireo ho an'ny mpiara-miombon'antoka Kanadiana ao amin'ny RDV Forum karakarain'ny CRIAQ (Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale au Québec), consortium fikarohana kanadiana. Hevitra miisa 17 avy any Alemana, ampifanarahan'ny Ivotoerana ZAL ao Hamburg ho an'ny Applied Aeronautical Research, no ho anisan'izy ireo. Izany no mahatonga ny Repoblika Federalin'i Alemana ho firenena vahiny voafidy tsara indrindra. Ny Herinandro Iraisam-pirenena ho an'ny Aerospace dia mifarana amin'ny 20 aprily miaraka amin'ny fitsidihan'ny orinasam-panamoriana fiaramanidina eo an-toerana sy ny fifaninanana ho an'ny mpianatra ao amin'ny AeroPortail.